आज पनि बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर कति पुग्यो ? – LIVE 48 MEDIA
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (फागुन २३) जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । बिहीबार डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको थियो ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १३० रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १३१ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी पाउण्ड एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ। यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ । र, युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ ।
Previous Article १० रुपैयाँमा पाइने मास्क बजारमा ३०० रुपैयाँसम्म पर्न थाल्यो, मास्क लुकाउने र बढी मुल्यमा बेच्नेलाई २ लाख जरिवाना हुने !
Next Article आजको राशिफल / २०७६ फाल्गुन २४ गते शनिबार